Yaa Tuffii Oromoo!! Hidhamtoota Siyaasaa Oromoo Caamsaa 17/2021 mana murtii federaalaa Olaanaa damee Caffee Muuda bilisa lakkise Awwash Arbaatti argaman. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsYaa Tuffii Oromoo!! Hidhamtoota Siyaasaa Oromoo Caamsaa 17/2021 mana murtii federaalaa Olaanaa damee Caffee Muuda bilisa lakkise Awwash Arbaatti argaman.
Ilmaan Oromoo Galmee Kiisii Qixumaa jalatti argaman himatamtoota 20 keessaa namoonni 12 bilisaan caamsaa 17/2021 akka bahan M/murtii ajajee ture caamsaa 18/2021 mana hidhaa Qiliinxoo irraa yeroo bahanitti balbala mana hidhaa Qiliinxoo irratti humnootni waraanaa humna addaa Oromiyaa qabanii ukkaamsuun kaampii waraanaa Galaan Daandii Baaburaa cinaatti argamu geessanii bulchuun caamsaa 19/2021 Awaash Aarbaa geessuu Sagaleen Qeerroo Bilisummaa Oromoo mirkaneeffatee jira.
Yeroo ammaa hidhamtootni siyaasaa Oromoo manni murtii bilisaan lakkise dabalatee fi kanneen mana murtiitti hin dhiyyaatiin maatiin isaanii bakka jiran hin beekne kaampii waraanaa Gammoojjii Awaash Arbaa mooraa waraanaatti hidhamanii dararamaa jiraachuun barameera.
Maqaa hidhamtoota M/murtii fdederaalaa olaanaa dadhachi Caffee Muudaa bilsaan lakkisee poolisiin ugguruun gammoojjii Awaash Arbaa geessuun dararaa jiru
kol. Gammachuu Ayyaana
Dr, fayyeeraa mokoonin
Inspeektar Dorombos cuukoo
Chariinat Tarrafee kanneen jedhaman yoo tahu ammaan duras Itti gaafatamaa Sab quunnamtii hawaasaa ABO jaal Battee Urgeessaa fi Gafarsoo Dabalaa dabalatee namoonni biroon jaha caamsaa 16/2021 mana hidhaa Buraayyuu irraa fudhatamanii gara kaampii waraanaa gammoojjii Awaash Aarbaa geeffamuun ni yaadatama.